Indonesia Announces Tax Relief for Manufacturing During Virus Outbreak | Myanmar Business Today
Home Business Local Indonesia Announces Tax Relief for Manufacturing During Virus Outbreak
Manufacturing companies in Indonesia will not have to pay out income tax for their workers for six months, under measures to support Southeast Asia’s biggest economy during the coronavirus outbreak, ministers said on March 11.
Finance Minister Sri Mulyani Indrawati has warned economic growth could weaken to 4.7 percent this year, from 5.02 percent in 2019, amid increasing business disruptions caused by the virus outbreak.
The central bank has also said it was likely to trim its 2020 growth outlook, currently at around 5.1 percent, during its policy meeting on March 18-19. Bank Indonesia had already cut rates and lowered its growth outlook last month in response to the coronavirus outbreak.
“All of these are aimed at providing some space for industries which are now inavery tight situation. Their burden is going to be minimized by the government,” Indrawati told reporters.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူစက်မှုကြောင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရစဥ်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကူအညီပေးသည့်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော အစီအမံများအရ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားများအတွက် ဝင်ငွေခွန်ကို နောက်ခြောက်လစာ ပေးစရာ လိုတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ အစီအမံအသစ်များကြောင့် ‌မည်မျှ ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးခံနိုင်မည်ဆိုသည်ကိုတော့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့ လစာငွေများအပေါ် အခွန်လျှော့ပေါ့ပေးခြင်းက အလုပ်သမားများကို အကျိုးများစေမည်လား၊ ကုမ္ပဏီများကို အကျိုးများစေမည်လားဆိုသည်ကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Sri Mulyani Indrawati ကတော့ ယခုနှစ်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၄ဒသမ ၇ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျော့ကျနိုင်သည်ဟု သတိပေးထားသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှ၊စ်ကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၅ဒသမ၀၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။
ထို့အတူ ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့်လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာကို လျှော့ချခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် အတိုးနှုန်းများကို လျှော့ချထားပြီးဖြစ်ကာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခန့်မှန်းချက်ကိုလည်း လျှော့ချခဲ့သည်။
ဧပြီလတစ်ရက်နေ့မှ စကာ အစိုးရအနေဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို ဝင်ငွေခွန်ပေးရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းအပါအဝင် အခွန်စည်းမျဥ်းများစွာကို ဖြေလျှော့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း Indrawati က ပြောသည်။
SOURCETabita Diela and Gayatri Suroyo (Reuters)
Previous articleAlipay to Open App to More Services to Take on Meituan
Next articleAsia Buyers to Maximize Middle East Crude for April after Price Cuts